विवाहको अर्थ के हो ? के बिहे गर्नु जरुरी छ ? - ramechhapkhabar.com
विवाहको अर्थ के हो ? के बिहे गर्नु जरुरी छ ?
सवप्रथम हामीले बुझ्नुपर्छ कि विवाहको व्यवस्था किन गरिएको हो ? हरेक मानिस, चाहे त्यो पुरुष होस् वा महिला, केही न केही आवश्यकताहरु हुन्छन् । यदि मैले तिमीलाई ८ वर्षको हुँदा विवाहको बारेमा सोधेको भए यो प्रश्नको कुनै अर्थ नै हुने थिएन ।
यदि तिमी १४ वर्षको हुँदा मैले यो सोधेको भए, तिमी अलिकति लजालु भएको हुन सक्छौ किनभने त्यतिबेला तिमी केही सोच्ने गर्दथ्यौं । तपाईंको शरीर एक निश्चित तरिकाले बढ्दै गएको र हर्मोनले तपाईंको बुद्धिमा असर गर्न थालेको कारणले तपाईंले यस बारे सोच्नुहुन्थ्यो ।
यदि मैले तपाईलाई २० वर्षको उमेरमा यो सोधेको भए, तपाईले हुन्छ वा अहिले हुन्न अथवा अरु केहि भन्नु हुन्थ्यो । तपाईले यो निर्णय १४ र २० वर्षको उमेरमा भोग्नु भएको समयको आधारमा आउने थियो । तपाई हुन्छ वा हुँदैन वा अहिले नगर्ने जस्तो कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ ।
संसारका केही भागहरूमा, केटाकेटीहरूले अहिले रमाइलो गर्ने स्वतन्त्रता पाएका कारणले गर्दा विवाह शब्दको केही नकारात्मक अर्थ लिएको छ । अहिले केही समाजका युवाहरूले विवाहलाई नराम्रो कुराको रूपमा हेर्छन् ।
जब तपाईं जवान हुनुहुन्छ तपाईं यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ किनभने तपाईंलाई विवाह एक प्रकारको बन्धन जस्तो लाग्छ, जसले तपाईंलाई बाँध्छ । तपाईं एक निश्चित तरिकामा केहि गर्न चाहनुहुन्छ । तर, जब शरीर कमजोर हुन्छ, तब फेरि तपाईलाई लाग्छ कि तपाईसँग प्रतिबद्ध कोही हुनुपर्छ ।
म बलियो हुँदा कसैको साथ चाहिदैन तर कमजोर हुँदा कोहि मेरो साथमा होस् भनी सोच्नु एकदमै केटाकेटीपन वा अपरिपक्व हुनु हो । वास्तवमा कुनै पनि साझेदारी वा सम्बन्ध तब मात्र बनाउनु पर्छ जब तपाईं खुशीका साथ सम्बन्ध गास्न तयार हुनुहुन्छ ।
जब तपाईं कमजोर हुनुहुन्छ, तपाईं जे भए पनि सम्बन्ध बनाउन चाहानुहुन्छ । जब तपाईं ठीक हुनुहुन्छ अर्थात जब तपाईं सफलताको शिखरमा लम्कन चाहनुहुन्छ, तब तपाईंले सम्बन्ध गास्नुपर्छ जसले तपाईंलाई जीवनको उतार चढावहरूमा साथ देओस् ।
सम्बन्ध गास्नु पुर्व तपाईका शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र आर्थिक आवश्यकताहरू हुन्छन् । मानिसहरू सचेत भएर यी कुराहरू सोच्न चाहँदैनन्, किनभने उनीहरूलाई लाग्छ कि यसो गर्दा उनीहरूको वैवाहिक जीवन बिग्रन्छ । तर यी आवश्यकताहरू रहन्छन्, र यस बारेमा विचारहरू आउँछन् ।
अहिले महिलाहरुको लागी केहि हद सम्म संसार परिवर्तन भएको छ । अब उनीहरुले सामाजिक र आर्थिक कारणले मात्रै बिहे गर्नु पर्दैन । उनीसँग विकल्पहरू छन् र अब उनी आफ्नै बाटो रोज्न सक्छिन् ।
अब उनीहरूले आफ्नो सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई सम्हाल्न सक्छन् । सय वर्ष पहिले यस्तो थिएन, अब केही स्वतन्त्रता छ । अब उनीहरूले विवाह गर्नुपर्ने कम्तीमा दुई कारणहरू छन् । उनीहरूले अरू तीनको बारेमा सोच्नुपर्छ ।
यो कुनै सामाजिक नुस्खा होइन- सबैले विवाह गर्नुपर्छ वा कसैले विवाह गर्नु हुँदैन ? यसको एउटै उत्तर हुन्छ, एक व्यक्तिको रूपमा तपाईंको आवश्यकताहरू कतिको बलिया छन् ? के यो केहि निरन्तर आवश्यकता हो जुन तपाईं मन देखि गर्न चाहनुहुन्न ?
त्यसो हो भने बिहे नगर्नुस् किनकी कसैसँग सजिलैसंग जोडिनुको कुनै फाइदा छैन । बिहे गरेमा दुई जनाले मात्र नभई पूरै परिवारले यसको परिणाम भोग्नुपर्छ । मैले बिहे गर्नु गलत हो भनेर भनेको होइन तर प्रश्न यो हो कि ‘के तपाई चाहनुहुन्छ ?’ हरेक व्यक्तिले आफुले सोच्नुपर्छ, सामाजिक नियम पालना गरेर मात्रै बिहे हुँदैन ।
विवाह गर्नुमा केही गलत छैन, तर यदि तपाईंले आवश्यक नभएको बेला गर्नुहुन्छ भने यो एक अपराध हो किनभने तपाईंले आफ्नो र कम्तिमा एक व्यक्तिलाई चोट पुर्याउनुहुनेछ । जब कसैले गौतम बुद्धलाई सोध्यो, “मेरो साथि होस् ?”, उहाँले भन्नुभयो, “मूर्खसँग हिड्नु भन्दा एक्लै हिड्नु राम्रो हो !”
म यति मात्र भन्छु कि तपाई जस्तो कोही अर्को मूर्ख फेला पर्यो भने विवाह गर्न सक्नु हुन्छ । तर तपाईको आवश्यकताको आधारमा मात्र, समाजले के भन्छ भनेर होइन, न त अरुले बिहे गरिरहेका छन् भनेरै हो ।
सबैले विवाह र सन्तान जन्माउनु अनिवार्य वा आवश्यक छ र ? हो, यदि मानव जाति लोपको कगारमा थियो भने, हामी सबैलाई विवाह गर्न र बच्चाहरू जन्माउन सल्लाह दिन्छौं, तर यहाँ मानव जनसंख्या पहिले नै विस्फोटक दरमा बढिरहेको छ । आज यस्तो समय छ कि यदि तिमी बच्चा जन्माउँदैनौ भने तिमी मानव जातिको उपकार गर्दैछौं ।
तर, यदि तपाईंले विवाह गर्नुभयो र विशेष गरी, बच्चाहरू भए, बच्चाहरू हुर्किए, पढे र राम्रो काम गर्दै गए भने त्यो तपाईको २० वर्षको काम हो । यदि तिनीहरू राम्रो छैनन् भने यो तपाईंको लागि जीवनभरको दुख हो । यी सबै गर्न चाहनुहुन्छ भने कम्तिमा २० वर्षसम्म स्थिर वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । नत्र बिचमा छाडेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा पर्नु हुँदैन ।
अर्को कुरा, तपाईंले विवाह र सम्बन्ध विच्छेदको बारेमा एकै पटक कुरा गर्नु हुँदैन तर यी विषय एक आपसमा जोडीएका हुन्छन् । हालसम्म, नेपालमा विवाहको समयमा कसैले सम्बन्धविच्छेदको बारेमा कुरा गर्दैनन् । यदि केहि समस्या आयो भने यो बिल्कुल गलत हो तर यसलाई ठीक गर्ने कुनै उपाय छैन र उनीहरू छुट्टीनुपर्छ भने यो धेरै दुर्भाग्यपूर्ण छ । तर पनि विवाहसँगै यस विषयमा योजना बनाउनु हुँदैन ।